décembre 2017 – filazantsaramada
MIALA AMIN’NY RATSY FANAO
« Ary hoy Jehovah: Efa hitako tokoa ny fahorian’ny oloko izay any Egypta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon’ny mpampiasa azy; eny, fantatro ny alahelony; » (Eksodosy 3:7) Rehefa anjakan’ny faharatsiana ny tany onenana dia feno fitarainana izany tanàna izany, hoy Jehovah: lehibe ny fitarainan’ny tanàna ary ny fahotany dia mavesatra indrindra. Mitaraina ny olona, […]
Publié parfilazantsaramada décembre 26, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MIALA AMIN’NY RATSY FANAO
OLONA MANAO AHOANA LOATRA JESOSY
Raha ny safidy maha olona dia ny hiadana sy ny hilamina ny fiainana. Fa ny an’i Jesosy dia hafa kely: « Fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana Azy: Ary ny dia kapoka taminy no nahasitranana antsika. » Isaia 53:5b Nampijaliana Izy, nokapohina Izy. Ny vokatra azo amin’izany anefa dia ho antsika rehetra. Mahazo fihavanana amin’Andriamanitra isika noho izany […]
Publié parfilazantsaramada décembre 15, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur OLONA MANAO AHOANA LOATRA JESOSY
NY AO AMIN’I KRISTY JESOSY
« Fa tsy fantantsika izay vavaka tokony ataontsika; fa ny Fanahy no mifona ho antsika amin’ny fitarainana tsy azo tononina. » Romana 8:26 Raha mamaky ny Soratra Masina isika dia mbola ny Fanahy no manambara amintsika izay tena tiany ambara. Raha ny maha olombelona antsika dia tsy mahatakatra ny saindalin’Andriamanitra isika, ary raha izany tsy haintsika koa […]
Publié parfilazantsaramada décembre 8, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY AO AMIN’I KRISTY JESOSY
NY RAN’NY ZANAKA
« Tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy. » Romana 8:1 Mitaky fahamarinana avy amintsika ny lalàna. – Raha mandeha araka ny nofo isika dia tahaka ireo Fariseo, nitady hanamarina ny tenany, ary tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin’Andriamanitra. Tsy nino Ilay faran’ny lalàna izy, dia i Jesosy Kristy, Ilay làlana sy fahamarinana ary fiainana. […]
Publié parfilazantsaramada décembre 4, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY RAN’NY ZANAKA